Niteraka hetsi-panoherana tany Nepal ny nanomezana anarana labiera soisa avy amin’ny anaran’ny mpanjaka farany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2018 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, नेपाली, русский, Español, Português, Deutsch, 日本語, English
Nahatezitra ny Nepalis ny mpamokatra labiera Soisa Turbinenbräu raha nampiasa ny anarana sy ny sarin'ny mpanjaka tao Nepal teo aloha izy ireo hamoahana vokatra labiera vaovao.
Rehefa nampiditra ny tsiro timur Nepali tamin'ny famokarana ny hanitry ny labiera vaovao ny Turbinenbräu dia nanapa-kevitra ny hiantso izany hoe Birendra izay manondro ny anaran'ny mpanjakan'i Nepal izay nanjaka nanomboka tamin'ny taona 1972 ka hatramin'ny 2001. Napetrany niaraka tamin'izany ihany koa ny sarin'ny mpanjaka mitsiky sady mihazona veran-dabiera iray. Naharomotra ireo Nepalis indrindra ireo izay mpanohana ny fitondram-panjaka izany .
Beer is King ?pic.twitter.com/xCVc4vwm4t
Vondrona mpanohana ny mpanjaka vitsivitsy no nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny Masoivohon'i Soisa ao Nepal noho ny ‘fanevatevana’ ny lovan'Itompokolahy mpanjaka. Nisy ihany koa ny fanangona-tsonia antserasera manohitra ilay antsoina hoe Labiera Birendra .
Voalaza fa niantso ilay mpamokatra labiera ny ambasadaoron'i Soisa any Nepal izay nangataka azy hanaisotra ny dokambarotra rehetra tamin'ny aterineto momba ilay labiera. Nanapa-kevitra ny hampiato ny fampiroboroboana ilay labiera izay nampiasa ny tsiron-tsakafo timur Nepali ny orinasa taorian'izany.
Tamin'ny alàlan'ny mailaka iray ho an'ny Global Voices tamin'ny 15 May 2018, nilaza izy fa mbola amidy ny vokatra labiera saingy amin'ny lohataona ihany no ahitana izany.
Nampalahelo ny adihevitra satria tokony ho fotoana nahafahana nanohana ny fampiasana ny timur na fantatra kokoa amin'ny anarana hoe dipoavatra Nepali izany. Timur, karazan-tsakay amin'ny Zanthoxylum, dia otazana avy any anaty ala ary ampiasaina ho tsiron-tsakafo, zava-manitra ary fanafody. Karazana Zanthoxylum miisa valo no vokatra betsaka any amin'ny distrika miisa 30 any Nepal.
Ampiasaina hikarakarana sakafo any amin'ny firenena Eoropeana maro ny menaka zanthoxylum. Mahasarika betsaka ny firenena toa an'i Etazonia ihany koa ny fampiasana ny timur ho toy ny hanitra fahandroan-tsakafo .